काठमाडौंमा पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउने सरकारको तयारी! खबरमञ्च
२५ असार, खबरमञ्च, at 7:38 AM
By खबर मञ्च / July 9, 2020 / Comments Off on काठमाडौंमा पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउने सरकारको तयारी!
काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोगले राजधानी उपत्यकालाई च्याप्न थालेपछि सरकारले व्यापक रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । राजधानी उपत्यकामा दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेसँंगै सरकारले उपत्यका तथा बाहिर ४५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
Last Modified: July 9, 2020 @ 7:38 am